१ किलो पनिरको १ लाख १० हजार ! « Mazzako Online
१ किलो पनिरको १ लाख १० हजार !
अहिले महंगीले आकाश छोएको छ भन्दा फरक नपर्ला । सरसामानको मुल्य बढेसँगै मानिसहरुको आम्दानी पनि बढे त यसको असर कमै देखिने थियो तर मुल्य बृद्विसँगै आम्दानीमा बढोत्तरी नहुनाले निकै ठुलो समस्या पर्ने गरेको छ । किनमेलका बस्तुको मुल्य त बढेको नै छ तर पनि हाम्रो देशमा महंगी यति सारो बढिसकेको छैन की जहाँ पनीरको मूल्य किलोको १ लाख रुपैयाँ परोस् । तर सर्बिया भन्ने देशमा पनिरको मुल्य किलोको झण्डै १ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबर पर्दछ ।
सर्बियाको जेसाविक नेचर रिजर्वले महंगो मूल्यमा पनीर बेच्दै आएको खबर छ । पनिरको दाम किन यति महंगो त ?? मनमा जिज्ञासा उब्जनु स्वभाविक नै हो । निकै महंगो मुल्यमा विक्री हुने यो पनिर गधाको दुधबाट बनाईन्छ ।
विज्ञहरुका अनुसार गधाको दुध एन्टी एलर्जिक हुन्छ र भिटामिन सी पर्याप्त पाइन्छ । सर्बियाको जेसाविक नेचर रिजर्भका व्यवस्थापक स्लोबोदन सिमिकका अनुसार उक्त आरक्षमा १ सय ४० गधा पालिएको छ र एक पटकमा १२ वटा गधाको दुध दुहुने गरिन्छ । त्यस्तै गरि गधाको दुधको मूल्य प्रति लिटर झण्डै ४५ सय रुपैयाँ पछै भने एक किलो पनीर तयार पार्न २५ लिटर जति दुध आवश्यक पर्छ ।